အသံလွှင့်ရုံထုတ်လုပ်သူများ - China Broadcast STATION Factory & Suppliers
KD-BC-4H အရောင်းရဆုံး တိုက်ရိုက်အသံသွင်းခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် တွန်းလွှင့်ခြင်း အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော Virtual Studio အစိမ်းရောင် စခရင်သော့စနစ်
6. High-definition input screen4ခု နှင့် high-definition output screen2ခု အသီးသီး PVW/PGM ကို ပြသသည် ။
8. SDI ဗီဒီယို၊ အသံ၊ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ TALLY နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ထုတ်လွှင့်ရန် 75Ω coaxial ကေဘယ်လ်ကို ကင်မရာပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကာကွယ်မှုပါရှိသော SDI ထည့်သွင်းသည့် မျက်နှာပြင်သည် SDI ဗီဒီယို၊ အသံ၊